Mpempe akwụkwọ mbubreyo nke mbubreyo | Rayson
Mbubreyo mbubreyo mmiri
Ebe ọ bụ na ọdụ ntọala, ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson mmiri na-elekwasị anya na ịnye ndị ahịa na ngwaahịa kachasị mma. A raara ndị ọrụ ọkà mmụta ọrụ ndị ọkachamara n'ihe na-eju ha afọ ojuju na-adabere na akụrụngwa na usoro kachasị dị elu. Ọzọkwa, anyị edobela ngalaba ọrụ na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ ozugbo na arụmọrụ nke ọma. Anyị na-anọkarị ebe a iji tụgharịa echiche gị n'eziokwu. Chọrọ ịmata ozi ndị ọzọ gbasara matrax ọhụrụ anyị, ụlọ ọrụ anyị, na-anabata anyị ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Na-ezuru oke nke mbubreyo na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị na-eweta ndị na-emepụta ihe, na-etolite, mepụta, na nwalee ihe niile arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere akwa oge ntopute, kpọọ anyị ozugbo.
Ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson mmiri na-agbasa ike na arụmọrụ ọrụ dị elu. Ọzọkwa, anyị ebilitela nke ọma REND R & D siri ike R & D siri ike, nke na-eme ka anyị zụlite ngwaahịa ọhụrụ dịka matrax nke mmiri mmiri na-eduzi omume. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ndị ahịa na-enye afọ ojuju dịka ọkachamara na ngwa ahịa ahịa. Anyị na-anabata ajụjụ gị na nleta ala.
Siri ike Sọọsọ Sịọd Pog Pou opupu akpa aka
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa ngwaahia Natural latex ohiri isi Thailand emepụta FromChina Ebumnuche atụmatụ nke Rayson na-ekpuchi akụkụ ndị a: static na ike siri ike, ọsọ ọsọ, gearboxes, akwụkwọ ntuziaka, na njikwa akpaka.